SAWIRRO:-Danjire Michael Keating oo la kulmay jaaliyadda Soomaalida ee Norwey | Warbaahinta Umada Soomaaliyeed	Sunday, April 23rd, 2017	Home
SAWIRRO:-Danjire Michael Keating oo la kulmay jaaliyadda Soomaalida ee Norwey
Mar 17, 2017 - jawaab	Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating ayaa kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway, waxaana kulanka ku weheliyay ergeyga gaarka ah ee Norway u qaabilsan Soomaaliya Jens Mjaugedal.
Kulanka oo ay soo agaasintay wasaaradda arrimaha dibadda Norway ayaa lagu falanqeynayay xaaladda Soomaaliya doorashada kaddib iyo doorka Qaramada Midoobay iyo beesha caalamku ay.ka qaateen. waxaana warbixin kaddib Su’aalaha ugu badan ee Keating la weydiiyay ahaayeen kuwo ku saabsanaa dib u dhiska ciidanka iyo sababta ay beesha caalamku arrintaas uga caga jiideyso.
Keating ayaa sheegay in xalka Soomalaliya uu ku jiro gacanta Soomaalida ku nool Soomaaliya iyo qurbaha. Beesha caalamka iyo dowladaha dariskana ay kaliya ka caawin karaan arrintaas, balse ay adagtahay inay Q. M. iyo Beesha Caalamku ay wax walba u hagaajiyaan Soomaalida.
Keating ayaa maanta oo jimca ah kulan la qaadan doono wasiirka arrimaha dibadda Norway, Børge Brende, waxaana la filayaa in kulankaas looga hadlo arrimo ay ka midyihiin Abaaraha ka jira Dalkeena Soomaaliya .
Mr keating wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Somaliya aya sheegay in safarka uu ku joogo Norway u uga sii gudbi doono magaalada New York.